पीसीआर परीक्षण ‘पोजेटिभ’मा गम्भीर त्रुटि, ढाकछोप गर्न खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय - ।। Naya Kuro ।।
२४ असार २०७७, बुधबार १०:४६ July 8, 2020 Naya KuroLeaveaComment on पीसीआर परीक्षण ‘पोजेटिभ’मा गम्भीर त्रुटि, ढाकछोप गर्न खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा गत बुधवार कोभिड–१९ पहिचानका लागि ११४ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा सबैको पोजिटिभ नतिजा आयो ।
२४ घण्टामा सबैभन्दा बढी ७४० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको दिन गत शुक्रवार धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको ६५ नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा सबै नतिजा पोजेटिभ देखिएको थियो ।
त्यही दिन ललितपुरको पाटन अस्पतालमा गरिएको २०७ नमूना र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको ९६ नमुना परीक्षणमा सबै पोजिटिभ आएको थियो ।
विज्ञहरूका अनुसार हालसम्म मुलुकमा जति परीक्षण गर्‍यो, सबैमा पोजेटिभ आउने स्थिति छैन तर प्रयोगशालामा सबै नमूना पोजेटिभ नतिजा आउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले खासै ध्यान दिएनन् । यस्तो ‘प्राविधिक त्रुटि’बारे छानबिन पनि भएन ।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसीका अनुसार हालसम्मका परीक्षणमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्र पोजेटिभ आउने गरेको देखिएको छ । प्रयोगशालामा राखिएको किट सही तरिकाले प्रयोग नभएर सबै पोजिटिभ आएको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यसदिन संक्रमण नभएका व्यक्तिमा पोजिटिभ देखिएको हुन सक्छ । तर यो गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायत प्रयोगशालालाई यसबारे खोजबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । इपिडिमियोलजीले पीसीआरको रिएजेन्टसमेत जाँच गर्न भनेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक प्राविधिकले भने पीसीआर परीक्षणको विश्वसनीयता संकटमा पर्न सक्ने भएकाले उच्च स्तरबाटै यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रयोगशाला विशेषज्ञ एवं पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक उमेशप्रसाद गुप्ताले कुनै एउटा ठाउँको नभई धेरै ठाउँबाट संकलन गरिएका सबै नमुना एकै पटक पोजेटिभ हुनै नसक्ने बताए । उनले भने, ‘एकै दिन हालिएका सबै नमुना पोजिटिभ देखिनुका तीनवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो कन्टामिनेसन (दूषित हुनु) हो । तर हालसम्म किट शतप्रतिशत कन्टामिनेसन हुने गरेको छैन । दोस्रो प्रोटोकलमा रहेको सिटिभ्यालु राम्ररी विश्लेषण गर्न नसक्दासमेत यस्तो हुन सक्छ । पीसीआर किटको लट नै खराब हुँदा पनि यस्तो नतिजा देख्न सकिन्छ ।’
गुप्ताले पीसीआर मेसिनमा एक हजार परीक्षणको नतिजा ‘स्टोर’ रहने भएकाले यसको वास्तविकता थाहा पाउन खासै समस्या हुँदैन । ‘यो धेरै संवेदनशील कुरा हो, सरकारले यसमा व्यापक छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो गलत रिपोर्टका कारण कतिपयले आइसोलेसनमा बस्नुपरेको समेत हुन सक्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले त्यस दिन पोजेटिभको मात्र रिपोर्टिङ भएको दाबी गरे । ‘कहिलेकाहीं त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा मिलाएर पठाउँछन् । कहिलेकाहीँ पोजिटिभ नतिजाको मात्र रिपोर्टिङ गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं अति उच्च जोखिमको नमूना संकलन गर्दा पोजिटिभ हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले झूटो बोलिरहेको बताए । पीसीआर परीक्षणको नतिजामा देखिएको यस्तो अन्योल हुनु डरलाग्दो भएको उनको भनाइ छ ।
‘उहाँहरू सरासर झूटो बोलिराख्नुभएको छ,’ डा. दीक्षितले भने, ‘परीक्षणमा गडबड भएको आशंका छ ।’ उनका अनुसार किटमा गडबडी हुँदा वा चलाउने व्यक्तिले नजान्दा शतप्रतिशत पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हुन सक्छ । ‘हरेक परीक्षण किटको फरक–फरक मापदण्ड हुुन्छ,’ डा. दीक्षितले भने, ‘हरेक किटको आफ्नो सिटिभ्यालु हुन्छ ।’
डा. बीसीका अनुसार सबैभन्दा बढी ७ सय ४० नमूनामा पोजेटिभ देखिएको दिन शुक्रवार सबैभन्दा बढी उच्च संक्रमण दर १६.४ प्रतिशत देखिएको थियो । ‘यो फल्स पोजिटिभ नतिजा आएर देखिएको हो ।’ उनका अनुसार सरकारले यो विषयमा व्यापक खोजबिन गर्नु आवश्यक छ । इपिडिमियोलजीका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले प्रत्येक प्रयोगशालाको प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रयोगशालाहरूको नियमन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।- कान्तिपुर दैनिकबाट
मौसम पूर्वानुमान महाशाखा भन्छ, ‘भोलीदेखि मुलुकका धेरै भागमा भारी वर्षा हुन्छ’
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित
ट्रम्प भन्छन्, ‘केही साताभित्र आमरूपमा वितरणका लागि कोरोनाको खोप तयार हुनेछ’
१ आश्विन २०७७, बिहीबार १२:२० September 17, 2020 Naya Kuro
कोरोना भाइरसका कारण पिएसजीको खेल स्थगित
२४ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०६:३१ March 7, 2020 Naya Kuro
आज विश्वकर्मा पूजा उद्योग एवं कलकारखानामा पूजा गरिदै
१ आश्विन २०७६, बुधबार १३:०९ September 18, 2019 Naya Kuro
आज – १४ मंसिर (Nov. 28, 2020) २०७७ आइतवार को राशिफल